Global Voices teny Malagasy » Rosia: Mampihisatra ny fandrosoan’ny hafangainam-pandehan’ny aterineto ny manampahefana eo an-toerana ao Kraskovo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jolay 2018 3:53 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Nivory tao Kraskovo, tanàna kely iray akaiky an'i Moskoa, miantso ny hampitomboana ny fahafaha-miditra aterineto haingam-pitosaka sy ho fanoherana ny fanaovana ampihimamba amin'ny fanomezana tolotra aterineto ny Rosiana mpikatroka. Noresahan'ny mpikatroka ihany koa ny fitsipika tsy manao afa-tsy izay mampitarazoka ny fivelaran'ny fahazoa-miditra aterineto ao amin'ny firenena.
Efa tany am-piandohan'ny taona 2008 ny tantara raha nanambara ny drafitra hanolotra fidirana amin'ny aterineto haingam-pandeha ho an'ny mponina ao Kraskovo ny mpamatsy tolotra aterineto “CDMS, Ltd” (“Creative Direct Marketing Solutions”). Ny lalàna Rosiana dia mitaky amin'ny mpamatsy tolotra aterineto mba hahazo alàlana avy amin'ny manampahefan'ny tanàna alohan'ny hanolorana ny tolotra any amin'ny tanàna iray. Mila mahazo fankatoavana avy amin'ny Sampan-draharaham-piarovana Federaly (FSB) ihany koa ny mpamatsy tolotra aterineto ary mametraka rindrambaiko mety ahafahana mitroka ny fifamoivoizan'ny aterineto.
Nandritra ny 10 taona nizaran-draharaha teo amin'ny fihariana, efa zatra ireo karazana sakana ara-birao ny CDMS. Manoratra ao amin'ny bilaoginy ny filoha lefitry ny orinasa Vladimir Korvatsky (mpisera lj korvatsky ) fa tsy zava-baovao ny olana madinidinika amin'ny manampahefana eo an-toerana saingy hafa kosa ny raharaha Kraskovo.
Araka ny filazan'ny gazety Rosiana Moskovski Komsomolets  [RUS], raha nangataka fahazoan-dàlana hametraka ny tambajotra Ethernet ao Kraskovo ny CDMS, namerina ny fangatahana miaraka amin'ny fanamarihana i Mikhail Chuiko, ben'ny tanàna vao voafidy fa tokony hifanaraka amin'ny FSB ny dingana “mba hiantohana ny fiarovana manoloana ireo mpampihorohoro.” Rehefa nanome alalana ny fangatahana ny FSB, dia nangataka fankatoavana iray hafa avy amin'ny sampam-piarovana ny ben'ny tanàna. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tiany hanadihady ny orinasa ny FSB.
Tsy tokony hahagaga ny olona any Rosia izany. Matetika ny manampahefana ao amin'ny governemanta no manana fialantsiny marobe mba hanemorana ny fankatoavana ahafahany mandray kolikoly avy amin'ny mpandraharaha ho fanafainganana ny raharaha. Saingy, tsy tahaka ny tranga maro tahaka izany, tsy mila kolikoly avy amin'ny CDMS ny manampahefana ao Kraskovo. Najanon'izy ireo ny fifandraisana rehetra tamin'ireo solontenan'ny orinasa ary nampiseho fa tsy tian'izy ireo hiditra eo amin'ny tsenan'ny fanomezana tolotra aterineto eo an-toerana ny CDMS.
Manana mpamatsy tolotra aterineto roa manome fahafahana miditra malalaka i Kraskovo amin'izao fotoana izao: dia ny netts.ru sy avk-wellcom.ru. Nilaza  i Korvatsky fa tsy mahazo miditra ao an-tanàna ny orinasany sy ny orinasa hafa noho ny fifandraisana matanjaka sy ny tombontsoa ara-barotra iraisan'ny mpamatsy tolotra aterineto eo an-toerana sy ny manampahefana ao an-tanàna.
Nikarakara fihetsiketsehana manohitra ny tsy fihetsehan'ny mpamatsy tolotra aterineto ao an-tanàna i Vladimir Korvatsky sy ny fikambanan'ny tanora “Ny Tokontaninay”:
Namoaka fanambarana  ny sampan-draharaha miady amin'ny ampihimamba ao amin'ny faritra Moskoa, izay milaza fa mandika ny lalàna miady amin'ny ampihimamba ireo manampahefana ao Kraskovo .
Tsy maningana ity raharaha ity. An'arivony ireo tanàna kely Rosianina tsy manana tolotra fidirana amin'ny aterineto haingana. Matetika fialan-tsiny fotsiny mba hanaovana kolikoly goavana eo amin'ny fitantanana eo an-toerana ao amin'ireo tanàna ireo ny fitokana-monina ara-jeografika sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra. Mampiseho ny fomba fiezahan'ny mpamatsy tolotra aterineto handresy ireo olana ireo amin'ny alalan'ny hetsiky ny vahoaka ny ohatra ao Kraskovo. Mandritra izany fotoana izany, manome antony fanampiny ho an'ny manampahefana ao an-toerana mba hiampanga ireo mpanome tolotra aterineto ho manao filokana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/03/122220/
 Moskovski Komsomolets: http://www.mk.ru/social/publications/375018.html
 Namoaka fanambarana: http://mo.fas.gov.ru/news.php?id=403